Boldenone Undecylenate (Equipoise) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (13103-34-9) | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Boldenone အမှုန့်စီးရီး / Boldenone Undecylenate (Equipoise) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း
4.33 ထဲက5အခြေခံ3ဖောက်သည် ratings
SKU: 13103-34-9. Categories: Boldenone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
Boldenone Undecylenate (Equipoise) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကိုဗီဒီယို
Boldenone Undecylenate (Equipoise) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Boldenone Undecylenate (Equipoise) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း
သိုလှောင်မှုကို Temp: -20
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအသုံးပြုမှု
Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပုံမှန် Bold ဦး, Bu, Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း, အကာယဗလသို့မဟုတ် UGL ပိုင်ရှင်များ EQ ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Boldenone Undecylenate (Equipoise) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအသုံးပြုမှု
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလေ့တစ်ခုထိုးသွင်းရေနံအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ စျေးကွက်မှာတော့ 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, အခြို့ UGL ပင် 350mg / ml နှင့် 400mg / ml ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုထိုးသွင်းခံရဖို့လည်းခိုင်ခံ့ခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်။
Dianabol ဟော်မုန်းပါးစပ်အသုံးပြုရန်နှင့် 17AA ဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသည်နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်သာရှစ်နာရီဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ် မှလွဲ. Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း, ဟော်မုန်း Dianabol မှအဓိကအားညီမျှသည်။ Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဟာ EQ အများကြီးမဟုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ရှိနေမည်ထို့ကြောင့်ဒါအများကြီးပိုထိရောက်ပိန်ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားကိုတည်ဆောက်ဘို့အောင်ဖြစ်စေတဲ့, တည်တံ့ Dianabol ဒီတော့တိုတိုသော 17AA အုပ်စုတစ်စုမဆံ့မထားဘူး။
သင့်ရဲ့အသွေးနှင့်ကြွယ်ဝလျှင်သွေးနီဆဲလ်တွေအောက်ဆီဂျင်သယ်ဆောင်ကြောင့်လည်း EQ ကိုခေါ် Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း, သူတို့ရဲ့ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ခံနိုင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းခံနိုင်ရည်ကူညီပေးသည်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုအထိကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအားဖြင့်အသုံးပြုသည် အောက်စီဂျင်, သင်စိတ်အားသန်သောလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းမဟုတ်တော့ကြာရှည်။ ကအထွတ်အထိပ် bulk သံသရာအတွင်းမှာနှေးကွေးပေမယ့်တည်ငြိမ်အမြတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့် Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း, ဒါမှမဟုတ် EQ အားကစားသမားများ, ကာယဗလနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုနိူးအကြားရေပန်းစားသည်။ ဤရွေ့ကားသံသရာအတွက် EQ လာဘ်ဟုခေါ်ကြသည်။ EQ မရှိတော့တဆယ်နှစ်လုံးကိုပတ်ကထက်များအတွက်တစ်ပတ်လျှင် 200mg ထံမှ 600mg အထိကြောင်းဆေးများအတွက်အုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအပေါ်သတိပေး
များစွာသောလူမှတ်ချက်ချအဖြစ်, သင်ကအတန်းကျော်2ပတ် Clen မယူသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ receptors reset ဖို့နဲ့သင်တစ်ဦးချိုးယူကြဘူးလျှင် Clen ထိရောက်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်၏ receptors အစဉ်အဆက်တူညီပါလိမ့်မည်အာမခံချက်မရှိပါအချိန်လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကအများကြီးမဟုတ်တော့အချိန်များအတွက်တက်ကြွစွာအဲ့ဒီအချိန်မှာသော်လည်း, Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအားကစားသမားများအားဖြင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပတ်ကိုထိုးသွင်းသည်။ ဒါဟာလူတို့သညျအဘို့အတစ်ပတ်ကိုအများဆုံး 200-400mg (4-8 ml, 50mg ဗားရှင်း) ၏သောက်သုံးသောမှာအသုံးပြုသောဖြစ်ပါသည်, 50-75 မိန်းမတို့အဘို့တစ်ပတ်ကို MG ။ တစ်ဦး 25mg ဗားရှင်းရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သင့်ကြောင်းဆေးထိုးအသံအတိုးအကျယ်အတော်လေးမသက်မသာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောအချိန်ဇယားကိုထပ်မံသည်အခြားနေ့ကပေးသောထိုးအီလျှော့ချရန်ဖြစ်ကောင်း, ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှောင်ကြဉ်သကဲ့သို့တစျခုကိုလည်းမှန်မှန်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များကိုလှည့်ဖို့သတိထားယူသင့်ပါတယ်။ ကြီးမားလွန်းရေနံအသံအတိုးအကျယ်တဦးတည်းရဲ့ site သို့ထိုးသွင်းရပါမည်, တစ်ဦးအိုင်းနာကြောင်းခွဲစိတ်ယိုစီးမှုလိုအပ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်, အားကစားသမားများအများအားဖြင့် 3ml မှတစ်ခုချင်းစီကိုဆေးထိုးကန့်သတ်မည်ပိုကောင်းသည်အခြားအပတ်ကမပိုတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ထက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site ပြန်သုံးလို့။ Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူဒီ gluteus, ဒါပေမယ့်လည်းဆေးထိုး site ကိုပြင်ပေါင်သာ အသုံးပြု. လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ၏သင်တန်း 25mg နှင့် 50mg နှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာတွေအားလုံးကိုထုတ်ကုန်အသစ်များကို 100 မီလီဂရမ်နှင့်ရှင်းလင်းစွာအသုံးပြုသူအများကြီးပိုသောက်သုံးသောလွတ်လပ်မှုနှင့်ဆေးထိုးနှစ်သိမ့်ပေးရသောဤ Steroid တစ်မျိုး၏ 200mg / ml ကိုဗားရှင်းနဲ့အတူဖယ်ရှားပစ်နေကြသည် dosed ။
Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးကအလေးအနက်အားနည်းချက်ဖြစ်ကောင်းမှာအနည်းဆုံး 12 ရက်ပေါင်းဖြစ်သော၎င်း၏ရှည်လျားသောဝက်ဘဝဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အဆင့်ဆင့်မလုံလုံလောက်လောက်အကောင်းဆုံးဟိုအဘို့အမြင့်မားသော, မပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါ်ပေါက်ဖို့ခွင့်ပြုဖို့လုံလောက်တဲ့အနိမ့်သောကာလအတွင်းပြီးခဲ့သည့်ဆေးထိုးပြီးနောက်အချိန်ကာလတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွင်းရလဒ်များ။ ဤပြဿနာကိုတစ်ဖြေရှင်းချက်တစ်သံသရာသာအစောပိုင်းကအစိတ်အပိုင်းအတွက် Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
Dianabol ကျော် EQ ၏ preference ကိုအပြင် Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမကြာသေးမီကလူကြိုက်များစိုက်ပျိုးနှင့်အလေးမအားကစားတစ်ခုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြရိုးရှင်းစွာ EQ နှင့်အတူရရှိခဲ့ကြွက်သားထုထည်၏ခွန်အားအကျိုးအမြတ်နှင့်အရည်အသွေး Deca ၏အန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့, Deca Durabolin များအတွက်ဦးစားပေးအစားထိုးအဖြစ် EQ စဉ်းစားပါ။ ထို့အပြင် EQ အပြုသဘောသူတို့သင်တန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရုတ်သိမ်း၏ပြင်းထန်သောအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိုအပ်သည့်အမြင့်ဆုံးသွေးစီးဆင်းမှုနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်, တလျှောက်လုံးသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်သက်ရောက်သည်။
မလျင်မြန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆောက်အစား Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အရည်အသွေးကြွက်သားထုထည်တစ်ခုနှေးကွေးနေပေမယ့်တည်ငြိမ်အမြတ်များကိုကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကြာကြာသံသရာအတှကျအသုံးပွုသောအခါဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အများဆုံးအပြုသဘောသက်ရောက်မှုများသောအားဖြင့်ကြာချိန်အတွက် 8-10 ရက်သတ္တပတ်ထက်ပိုမိုကြာရှည်မြင်နေကြသည်။ ရရှိခဲ့အဆိုပါကြွက်သားအန်ဒရိုဂျင်နှင့်မြင်ချောအမြောက်အများဖြစ်ပေမယ့်အလွန်သတ်မှတ်နှင့်အစိုင်အခဲမထားသင့်။ ရေဖောင်းကြွက်သားများအချင်းရန်သည်အလွန်အထောက်အကူပြုမဟုတ်ပါကတည်းကမူးယစ်ဆေးရပ်စဲလိုက်ပြီဖြစ်ရာပြီးနောက်, Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏သံသရာအပေါ်ရရှိခဲ့အရွယ်အစားအများကြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံကုန်ကြမ်းပစ္စည်း Equipoise နှင့်ဂန္ bulk မူးယစ်ဆေး Dianabol နီးပါးတူညီကြသည်ကိုသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Dianabol7alpha alkylated နေစဉ် Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဝင်း, တစ်ဦး l17beta Ester (undecylenate) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဖယ်ဒီကနေမော်လီကျူးများတူညီကြသည်။ ၏သင်တန်းသူတို့တစ်တွေ Steroid တစ်မျိုး့ပါးစပ်ထိရောက်မှုထက်ပို 17-methylation သက်ရောက်မှုကိုပြသတတ်သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပြုမူ။
ဒါကအခြေခံ Testosterone နဲ့ Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း stack ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးအမြတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌များစွာသောစွန့်ခြင်းမရှိဘဲ, testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးသောက်သုံးသောအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အီစထိုဂျင် buildup ဒီ stack နှင့်အတူ Control ဖြစ်သင့်, သေးသေးတစ်ခုဟိုပြည်နယ်များ၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်အကူအညီပေးနေတာသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိဖို့သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအကြီးအအရင်ကဆိုရင်ကြွက်သား-တည်ဆောက်ခြင်း stack ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပေါ်ရရှိလိုသောကာယဗလနှင့်အခြားသူများအတွက်အားလုံးအရင်ကဆိုရင်များအတွက်တစ်ဦးကအကြီးအသံသရာ။ အလယ်အလတ်အန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အကျိုးအမြတ်အတွက်သံသရာရလဒ်များကို။
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း
EQ အရည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ min အလို့ငှာ 10grams / 10ml ။
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းစျေးကွက်
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဝယ်ဖို့ကဘယ်လို: AASraw ထံမှ Equipoise ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဝယ်ဖို့
ဆေးထိုးအသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ AASraw Providence သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% Boldenone Undecylenate / Equipoise ကုန်ကြမ်းအမှုန့်။
10g Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအရည်
16ml Grapeseed ရေနံ (GSO)
12 ml ကို GSO
12g Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအရည်
Equipoise (Boldenone Undecylenate Injection) နည်းပညာပိုင်းစာစောင်, စာမျက်နှာ 1-9
Hugh LJ Makin တည်းဖြတ် Steroid တစ်မျိုးအားသုံးသပ်ခြင်း, DB Gower, စာမျက်နှာ 815-823
JackF တည်းဖြတ်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်က Non-မွှားကုသရေးဆေးဝါးအကြွင်းအကျန်များ၏ဓာတုသုံးသပ်ခြင်း။ ကေးဂျိမ်းစ်ဃ MacNeil ။ Jian ဝမ်, စာမျက်နှာ 193
testosterone phenylpropionate အမှုန့်
Boldenone cypionate အမှုန့်
Nandrolone propionate အမှုန့်
10 / 12 / 2019 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
09 / 29 / 2019 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
Boldenone Acetate အမှုန့်
testosterone decanoate အမှုန့်